Usuku lwenkulumbuso yaseAmazon: nyuka uye kwi- $ 50 ngetyala ngokwenza ukuthenga kukutya okupheleleyo okanye i-amazon 4-star
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Usuku lwe-Prime Prime yaseAmazon: Yenyuka ufike kwi $ 50 ngetyala ngokuthenga kwi-Whole Foods okanye i-Amazon 4-star
Usuku lwe-Prime Prime yaseAmazon: Yenyuka ufike kwi $ 50 ngetyala ngokuthenga kwi-Whole Foods okanye i-Amazon 4-star
UHLAZIYO:Usuku lwe-Prime Prime yaseAmazon ngoku lubukhoma! Jonga ezona zivumelwano zishushu zePrime Day, kubandakanya Izivumelwano eziphambili zeAirPods nabanye abaninzi:
Eyona fowuni ixabisekileyo ngoSuku lweNkulumbuso
Ukuthengiswa kwemihla yeAmazon kumacwecwe
Izaphulelo kwii-smartwatches zeNkulumbuso
I-Amazon Kindle, izithethi ze-Echo, iipilisi zomlilo zithengiswa
I-Amazon Prime Day iyeza kwakamsinya, enokuthi ifumane phantse wonke umntu onwabile. Ngoku, abathengi beAmazon Prime banokufumana ukuya kuthi ga kwi-50 yolondolozo lwe-Prime Day. Usuku lweNtengiso yeNtloko yoThengiso sisithembiso sokwenza kanye loo nto: chitha i-10 yeedola, fumana i-10 yeedola kwi-Prime Day.
Umhla we-Amazon Prime Day ka-2021, amadili, iindaba kunye nolindelo
Inkcitho ye- $ 10, fumana i-10 yeedola kwikhredithi enikezelwayo iyafumaneka kwi-Intanethi okanye kwivenkile yokuthenga kwiMarike yokutya iphela. Ukuba ulilungu eliyiNtloko leAmazon, unokuzuza kwesi sibonelelo. Ngapha koko, isithembiso siyafumaneka kumalungu eNkulumbuso athengisa kwivenkile eAmazon, ezinje ngeAmazon Fresh, iAmazon Go, iAmazon Go Grocery, iAmazon Books, iAmazon Pop Up kunye neAmazon 4-star.
Nantsi indlela yokusebenzisa ukuchitha i- $ 10, fumana iikhredithi ze-Amazon Prime Day ze- $ 10
Ukuxhamla kwisibonelelo, Amalungu eNkulumbuso eAmazon kufuneka enze oku kulandelayo:
Ivenkile kwivenkile kuyo nayiphi na iMarike yokuTya okuThile kwaye uskene ikhowudi yeNkulumbuso kwiapp yeAmazon okanye usebenzise inombolo yefowuni edibeneyo ekuphumeni
Ngenye indlela, unoku-odola ukuhanjiswa okanye iveni kwimarike yokutya iphela usebenzisa iapps yeAmazon, okanye ngokuya kuyo amazon.com/wholefoods .
Unokufumana iikhredithi zoSuku lweNkulumbuso kwezi venkile zilandelayo zeAmazon:
IAmazon Fresh: Sebenzisa ikhowudi ye-QR kwiVenkile entsha eVenkile yeapp yeAmazon ekuphumeni
IAmazon Go, iAmazon Go Grocery: Sebenzisa usetyenziso lweAmazon Go okanye usetyenziso lweselfowuni iAmazon ebotshelelwe kwiakhawunti enkulu yeAmazon ukungena kwivenkile
Inkwenkwezi yeAmazon 4, iincwadi zeAmazon, iAmazon Pop Up: Sebenzisa iAkhawunti yeNkulumbuso ekuphumeni
Imiyalelo yendlela yokukhulula ikhredithi okanye iikhredithi kwiAmazon.com ngoSuku lweNkulumbuso ziya kuthunyelwa nge-imeyile kumalungu eNkulumbuso eAmazon emva kokuba begqibile ukuthenga.
Fumana ngaphezulu kweedola ezili-10 ukuxhasa amashishini amancinci endawo
Ukongeza, ungachitha i- $ 10 ekukhetheni amashishini amancinci endawo kwaye ufumane enye i-10 yeedola kwi-Prime Day. Esi sibonelelo siyafumaneka de kube ngu-Okthobha 12. Amashishini endawo akhethiweyo anokufumaneka apha: amazon.com/supportsmall
Ikhadi lesipho le- $ 100 yoSuku lwe-Amazon kwiKhadi leTyikityo yeVisa
Kude kube ngu-Okthobha u-31, amalungu eNkulumbuso afanelekileyo afaka izicelo kwaye avunywa kwiKhadi loTyikityo lweVisa yeNkulumbuso yeAmazon baya kufumana ikhadi lesipho elili- $ 100 kwangoko. Abakhumbula amakhadi bafumana ukonyuselwa kunye nezibonelelo onokuzifumana apha:
Eyona nto ibalulekileyo yokubukela i-s3 ijonge ubuso ngo-2018
Kutheni abantu belicaphukela iapile?
U-Apple wahlawulisa i-2M yeedola ngokungabandakanyi itshaja nge-iPhone 12
Eyona meko ilungileyo ye-LG G7 ThinQ okwangoku: ibhityile, inesitayile, ikhusela
Idili: Gcina i-150 yeedola kwi-iPhone 7/7 kunye (IMVELISO) Iinguqu ezibomvu kwi-Best Buy